🥇 Akaụntụ maka onye ezipụ
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 841
Video nke ajụjụ maka izipu ozi
Nye iwu maka izipu ozi
Nlekọta nke ọma nke ibu njem na-adabere na arụmọrụ nke izipụ ọrụ, mmelite na -eme ngwa ngwa yana mmelite nke ozi ejiri na nzukọ doro anya nke ịhazi njem. Iji dozie nsogbu a, ọ dị mkpa iji teknụzụ nke ngwanrọ kwekọrọ na ya. Usoro ihe omume maka ndị na-ezipụ ibu, nke ndị ọkachamara nke USU-Soft mepụtara, na-enye usoro zuru oke nke ngwaọrụ maka nlekota onunu na ọnọdụ ọrụ ụgbọ nke njem, ma na-enyekwa gị ohere ịhazi usoro arụmọrụ na nrụpụta nke ụlọ ọrụ ngwa ngwa. Usoro ihe omume USU-Soft maka ndị na-ezipụ ozi nwere ikike niile iji mee ka ọrụ gị rụọ ọrụ nke ọma ma dịkwa mma dị ka o kwere mee n'ihi na ọ nwere ọtụtụ ọrụ bara uru: akpaaka nke workflow, ntọala na arụmọrụ, ọrụ ndị na-akwụghị ụgwọ nke nkwukọrịta n'ime na nke mpụga, interface kensinammuo na usoro di mfe. N'otu oge ahụ, sistemụ arụmọrụ kọmputa nke anyị mepụtara dị iche site na ntụgharị ya. N'ime ya ị nwere ike ijikwa ngwaahịa na ụlọ nkwakọba ihe, ịhazi njem na ịhazi usoro mmepụta nke ugbo ala, mezie oriri mmanụ na ume, rụọ ọrụ na ịkwalite ọrụ na ahịa ma na-adọta ndị ahịa, na-eduzi ndị ọrụ nyocha na ọtụtụ ndị ọzọ. Anyị izipu ajụjụ software nke ibu njem nwere mgbanwe ntọala, nke mere na ajụjụ software nhazi ga-gaa na akaụntụ peculiarities na chọrọ nke ọ bụla ụlọ ọrụ.
Na-arụ ọrụ na mmemme nzere USU-Soft dispatchers, ndị na-ezipụ na-elele ọganihu nke ọkwa ọ bụla nke njem ụgbọ njem, na-akara akara nkebi ndị a gafere, tụlee ezigbo ụzọ na atụmatụ maka ụbọchị ahụ, gbakọọ ihe ndị fọdụrụnụ ma buo amụma oge mbata ị rutere ebe njedebe. Iji hụ na ebufere mbupu ọ bụla na oge, ndị ọrụ gị nwere ike ịgbanwe ụzọ njem na oge, mee ka mbupu sie ike, ma rụọ ọrụ na njikarịcha ụzọ. Ma nke a bụ naanị akụkụ nke ohere enyere site na mmemme nke ndị na-ezipụ anyị maka njikwa njikwa. Onye na-ebugharị njem ahụ ga-abanye data na ụgwọ akwụ ụgwọ n'oge nnyefe iji chịkwaa nnata nke akwụkwọ sitere n'aka ndị ọkwọ ụgbọala na-akwado ụgwọ ahụ. N'ihi nke a, ị nwere ike ịlele ihe ziri ezi nke akwụ ụgwọ n'oge ọ bụla. Tụkwasị na nke a, ndị na-ezipụ ozi nwere ohere ijikwa ọnọdụ ọrụ aka nke ugbo ala ejiri ma debe nchekwa data nke ụgbọ ala niile.
Ọdịdị laconic nke usoro izipu nke ndị na-ezipụ njikwa njikwa nwere ngalaba atọ dị mkpa, nke ọ bụla na-arụ ọrụ ọ bụla. Ngalaba Directories bu nchekwa data nke ndi n’iile mebere. Ndepụta akwụkwọ ndị ahụ, nke enwere ike imelite ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nwere ụdị ozi dị iche iche: ụdị ọrụ logistics, ụzọ ụgbọ elu na ụgbọ elu, nomenclature nke ngwongwo na akụrụngwa, ngalaba na ụlọ nkwakọba ihe, ihe maka ịme ndekọ ego na mmefu ego, tebụl ego na ụlọ akụ akaụntụ. Ngalaba Modul ahụ dị mkpa n'ịhazi ebe dị iche iche ọrụ. N'ime ya, ndị ọrụ na-edebanye aha iwu njem, gbakọọ ụgwọ dị mkpa maka mmejuputa ya ma chọpụta ọnụahịa nke ọrụ njem, mepee ụzọ kachasị mma ma gosipụta ụgbọ elu kwesịrị ekwesị. Njikwa nke onye na-ezipụ ụgbọ njem, nsuso nke mmeghari nke ego, ịdebe ndekọ ụlọ nkwakọba ihe, na ịzụlite usoro ịzụ ahịa na-emekwa ebe a. Ndị ọrụ gị na-eji ngwa ọrụ dịka olulu ahịa na nyocha nke ịdị irè nke ụzọ nkwalite nke ndị na-ezipụ anyị; mmemme nke njiri mara mma na-enye ndị na-ebu ibu. Ọrụ telephony na e-mail dịkwa maka n'efu. Ngalaba Akụkọ ahụ na-enye gị ohere ibudata akụkọ gbasara ego na njikwa iji mee nyocha zuru oke nke ndị na-egosi uru, ịba uru, ego na ego.
A ga-ewepụta ihe nrụpụta na nhazi usoro nke nsonaazụ ego na tebụl na-ahụ anya, eserese na eserese, ebe ị na-ewepụta akụkọ na mmemme nke ndị na-ezipụ akwụkwọ nke njikwa akaụntụ ga-ewe obere oge. Yabụ, sọftụwia ahụ nwere njirimara niile na ohere niile nke njikarịcha nke usoro nke mmemme nzaghachi nke ndị ezi ozi kwesịrị inwe. Nwere ike ibudata a free ngosi version nke software na peeji a mgbe ngwaahịa nkọwa. Njikwa njem ga-arụ ọrụ nke ọma n'ihi nguzobe nke usoro ịnyefe kacha nso na ọnọdụ ndị ahịa na ịkwadebe njem mbu maka imezu iwu. Ndị ọkachamara nke ụlọ ọrụ gị ga-abanye ozi gbasara akara akwụkwọ ikike, ụdị na njirimara ndị ọzọ nke ụgbọ ala, ndị nwe ha na akwụkwọ ndị metụtara ya. Controlgbọ njem izipu njem na-agwa ndị ọrụ nwere ibu ọrụ nke mkpa ọ dị ịmezi otu ụgbọ. Mgbe nnyefe nke ngwongwo na ibu, niile elu ịkwụ ụgwọ natara n'aka ndị ahịa na-e dere na iji nchekwa data iji adọ hazie edemede edemede. Na mgbakwunye, ekele nke nghọta ozi nke usoro nyocha, ị ga-enwe ike ịlele usoro ego na arụmọrụ ego, ebe a ga-eme ka data ego nke alaka niile dị n'otu akụ.
Iwu nke mpịakọta nke oriri nke mmanụ na mmanụ na-eme site na ndebanye aha na ntinye nke ndị na-anya mmanụ ụgbọala, maka nke a kpebiri oke oriri. Ọzọkwa, ndị na-ezipụ akwụkwọ na-etolite akwụkwọ ego, nke na-akọwa ụzọ na ndepụta nke ụgwọ. Usoro nnabata kọmputa ahụ na-agwa ndị ọrụ banyere mbata ọrụ ọhụụ wee nye gị ohere ịza ajụjụ ma chọpụta oge ole ejiri rụọ ọrụ ha. Na modulu CRM (Njikọ Njikọ Ndị Ahịa), ndị njikwa ahịa nwere ike iji ụdị ngwa ọrụ ndị a anaghị akwụ ụgwọ dị ka olulu ahịa, ntughari na ndebanye aha maka ihe kpatara ịjụ iwu. N'ime usoro nchekwa data ọhụụ, nnyefe ọ bụla nwere ọnọdụ ya na agba ya, nke na-eme ka ọrụ izipu ozi dị mfe, nyochaa usoro nnyefe ma gwa ndị ahịa. Ntụle nke ịdị irè nke mkpọsa mgbasa ozi eji eme ihe na-enye gị ohere ịchọpụta ụzọ nke nkwalite nke kachasị adaba maka ịdọta ndị ahịa ọhụrụ. Ekele maka nyocha nke ike ịzụta, ị nwere ike ịmepụta onyinye ịsọ mpi, mepụta ndepụta ọnụahịa na katalọgụ nke ọrụ wee zipụ ha site na e-mail.
Ọrụ nyocha nke mmemme mmemme na-enyere aka nyochaa ọnọdụ ego nke ụlọ ọrụ ahụ ugbu a wee chọpụta mpaghara kachasị baa uru maka mmepe azụmaahịa ọzọ. Nyochaa ikike nke ụgwọ na-ekpughe mmefu na-enweghị isi, na-ebuli ụgwọ ma na-abawanye uru nke ọrụ. A ga-emepụta akwụkwọ izipu ihe dị mkpa wee bipụta ya n'ụdị ọkọlọtọ.